Madaxweynana Cusub ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheeq Maxamuud oo Ladhaariyay – SBC
Madaxweynana Cusub ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheeq Maxamuud oo Ladhaariyay
Madaxweynaha Cusub ee Dowlada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheeq Maxamuud ayaa hada si rasmi ah loogu dhaafiyay Baarlamanka Hortiisa.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Soomaaliya Ayaa si rasmi ah ugu dhaariyay Madaxweyne Xasan Sheeq Maxamuud in uu si daacad ah u shaqeyn doono islamarkaana ka soo bixidoono howlaha loo igmay.
ka dib dhaarta Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya waxa uu halkaasi ka jeediyay hadal aad u qiimo badan, waxaana uu ugu horeyn halkasi uga mahad celiyay Mudanayaasha baarlamanka Soomaaliye ee u codeeyay.
Waxa uu ka hadlay madaxweynaha arimo kale oo ku aadan xaaladaha dalka isagoona balan qaaday in xaaladihii murugnaa ee dalku ku jiray ay caawa halkaasi ku dhamaatay ayna umada soomaliyeeed guda galeen waji cusub oo horumar horseedi doona.
Ka dib hadalka Madaxweynaha Cusub ee Dalka waxaa kulankii soo xiray oo ku dhawaaqay in uu kulankii xildhibaanadu ku doorteen Madaxweyne cusub maanta uu halkaasi ku dhamaaday isagoona sheegay in la shacin doono xiliyada soo socda caleema saarka rasmiga ah ee Madaxweyne Xasan Sheeq Maxamuud.
Waxay noqoneysaa mudo 42 sano ah ka dib markii ugu horeysay oo madaxweyne Soomaaliyeed lagu doorto gudaha Dalka, taasina waxa ay guul iyo horumar u noqoneysaa shacabka Soomaaliyeed.